I-Semalt ivula iifayile ze-Meta tag ze-Twitter zokukhuthaza ukukhankanywa kwe-SMM yakho
Iyonke inkampani inokuphumelela ekumiseni ishishini eliphambili le-intanethi. Ngokomzekelo, kunokwenzeka ukuba abantu basebenzisa ezi nkonzo ukuvelisa ukunikezelwa kokuqhubeka kolwazi olufunekayo ekuqhubekeni kwezicwangciso zokuthengisa ze-intanethi. Kwezinye iimeko, abantu basebenzisa ithuba lokuwenza ishishini libe yimpumelelo kwilizwe lezoshishino. Amacandelo okuthengisa okuDajethi afana neNtengiso yeNtlalo yeNtengiso (SMM) angakhokelela amathuba amaninzi okuphumelela kwintsimi yokuthengisa. Kukho kwakhona iziganeko ezininzi zabantu abavelisa inzuzo enkulu kwi-Twitter yokuthengisa.
Esi sikhokelo, esinikwe nguNic Chaykovskiy, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo we-10 (Semalt , unokukunceda umsebenzisi ukuba afumane iinkalo ezininzi zophuhliso lwewebhu ezifana nokudala iwebhusayithi.
Imisebenzi yokuLawulwa kweMidiya yeNtlalo efana nokuthengiswa kwe-Twitter kunokunceda abantu benze inkqubela phambili endleleni abathengi beqhosha kwiiwebhusayithi zabo. I-Twitter yinkonzo ye-SEO yoluntu yoluntu. Abasebenzisi kule sizinda basebenzisana ngokusebenzisa i-tweeting. Unako ukufikelela kwizigidi zabantu abathengi kwi-niche yakho usebenzisa iindlela ezilula zokusebenzisa i-Twitter. Ngokomzekelo, ukusetyenziswa kweetekethi ze-meta ze-Twitter ngamnye kunceda bonke abantu bafumana amathuba amaninzi okuphumelela kule nxalenye ethile.
Ukuvelisa itemplates eziqhelekileyo
Kwi-SEO, uphando lwegama elingundoqo lusebalulekileyo..Kwimeko ye-SMM, iimpawu zeemeta kunye neenkcazo kufuneka ziqulethe igama elingundoqo lomsila omude ukuze lisetyenziswe kwisimo. Kwi-webmasters abaxhomekeke kwi-SMM, iifayile ze-meta ze-Twitter zimele zinezinto eziphambili ezikunceda ukubeka. I-console yosesho ye-Twitter inomnye injini yokukhangela iimpawu ezingenza ukuba amaqela ngaphakathi kwendawo yakho akhangele umxholo wakho. Kwakhona kubalulekile ukuvelisa iithemplates eziqhelekileyo kule mi sebenzi. Iimpawu ze-automation ze-SEO ziyakuthumela iiflathi ezenziwe ngabanye kubo bonke abasebenzisi. Abaphathi beWebhsayithi basebenzisa iitemplates eziqhelekileyo banenzuzo yokwenza inkqubo ngokukhawuleza. Kukho ikhowudi elula ye-API abasebenzisi abayisebenzisayo ekwenzeni yonke inkqubo iphumelele.
Sebenzisa amagama angundoqo kumxholo wakho
Kulo lonke uphando lwegama elingundoqo, i-SEO idinga amagama angundoqo omsila wokusetyenziswa kwizinto ezibaluleke kakhulu kwi-website yomxholo. Inkcazo yeemeta, kunye nezinye iindawo zomxholo, idinga ulwazi olunokukhangela ngabasebenzisi be-intanethi. Abantu bavelisa imibono eyahlukeneyo yemveliso xa banikela imiyalezo ye-Twitter ibe yinto ephambili kwiinkcukacha zeeKhenketho zeeKhenketho zeeWebhsayithi. Iinkqubo ezininzi zokulawula umxholo zinemiba eyahlukeneyo yokunceda abantu benze utshintsho olufunekayo kwindlela amawebhusayithi aphendula ngayo iimfuno zomsebenzisi. Ngokomzekelo, amakhadi ezipho ze-Twitter kwi-console ye-Twitter yokuncedisa inceda abasebenzisi be-Twitter ukuba bafumane kwaye benze utshintsho olufunekayo kwimikhankaso yabo yesibhengezo kunye nezinye iinkalo zophuhliso lwewebhu.
Ukuphuculwa kweeNjini zoKhenketho kunokunceda wonke umphathi wewebhu afikelele kwizigidi zabaxumi ngokusebenzisa iindlela zokuthengisa ezilula. Kunokwenzeka ukwenza iinkalo zeNtengiso yezoLuntu, kunye nezinye izixhobo ze-SEO, ukwandisa abathengi babuyele kwiwebhusayithi yakho. Kukho neminye imisebenzi abantu abayisebenzisayo ukwenza iiphulo zabo zokuthengisa ziphumelele. Kwiimeko ezinkulu zeemveliso, iifayile ze-meta ze-Twitter zingabalulekile ekuthumeleni imiyalezo esheshayo. Unokwazi ukwenza utshintsho oluninzi endleleni apho i-Twitter ifinyelela khona ubuninzi babo.